Izilwanyana zasendle kwiiLwandle ezinkulu
Iindawo eziLwandle eziMkhulu ziluhlu lweeklasi ezinamanzi amahlanu aphezulu, aphantsi kwamanzi aseNyakatho Melika, ajikeleza umda weCanada kunye ne-United States. AmaLwandle amakhulu aquka uLwandle u-Erie, iLake Huron, uLwandle lwaseMichigan, uLwandle lwase-Ontario kunye neLake Superior kunye kunye kunye neqela elikhulu kunawo onke amachibi amanzi eMhlabeni. Ziqulethwe kwi-Great Lakes watershed, ummandla ogxothwa ngamanzi kuMlambo waseSt. Lawrence kwaye ekugqibeleni, i-Atlantic Ocean.
IiLwandle eziMkhulu zihlanganisa indawo engama-95,000 eekhilomitha ezili-1,6 kwaye zibambe malunga neekhilomitha ezingama-5 500 zamanzi (malunga nama-20 ekhulwini kuwo wonke amanzi aphezu komhlaba kunye nama-80 ekhulwini ngamanzi amanzi eNyakatho Melika). Kukho ulwandle olungaphezu kwamamayela angama-10 000 olwenza amaLwandle amakhulu kunye nentshonalanga kuya empuma, amachibi angamawaka angama-750.
AmaLwandle amakhulu awakhiwa ngexesha le- Pleistocene Epoch njengesiphumo sokuhlaziya ngokuphindaphindiweyo kwendawo ngexesha le-Ice Age. Abaqholi baqhubela phambili baze bahlaziya ngokuphindaphindiweyo, ngokukhawuleza baveze iindawo ezinzulu ezikuMlambo oMlambo oMkhulu. Xa ama-glaciers aphelile ekupheleni kwexesha lokugqibela elibucayi malunga neminyaka eyi-15 000 eyadlulayo, amaLwandle amakhulu azaliswe ngamanzi ashiywe emva kwe-ice melting.
AmaLwandle amakhulu kunye namazwe abo azungezile ziquka indawo ehlukahlukeneyo yamanzi aphelileyo kunye neendawo zokuhlala komhlaba eziquka amahlathi e-coniferous kunye namahlathi anqabileyo, amanxweme amanzi ahlambulukileyo, amanxweme amanzi ahlambulukileyo, iindunduma, iindunduma kunye nemifudlana.
Ummandla weLwandle oluLwandle luxhasa iifama ezahlukahlukeneyo eziquka iintlobo ezininzi zezilwanyana ezincelisayo, ama-amphibians, iintaka, izilwanyana ezinwabuzelayo kunye neentlanzi.
Kukho iintlobo ezingaphezu kwezi-250 zeentlanzi ezitholakala kwiiLwandle eziMkhulu ezibandakanya i-salmon yase-Atlantic, i-bluegill, i-brot trout, i-salmon ye-Chinook, i-salmon, i-salmon, i-drum yamanzi ahlambulukileyo, i-sturgeon echibi, i-lake trout, i-whitefish, i-pike, i-rock, i-walleye , i-perch ephuzi kunye nabanye abaninzi.
Izilwanyana ezinomdla ziquka ibhere elimnyama, i-fox, i-elk, i-cow-tailed deer, i-moose, i-beaver, i-otter yomlambo, i-coyote, i-gray wolf, i-Canada lynx kunye nabanye abaninzi. Iintaka zeentaka ezizalwe kwiiLwandle eziMkhulu ziquka iinqanawa, iinqumba eziqhwaqhoqho, iibhokhwe ezinqabileyo, iibhoksi ezinkuni, iimpondo ze-blue, i-piping plovers, nangaphezulu.
IiLwandle eziMkhulu zihluphekile kakhulu iziphumo zentlobo (ezingezizo) ezidlulileyo kwiminyaka emibini edlulileyo. Iintlobo zezilwanyana ezingezangezilwanyana ezifana ne-zebra mussels, i-quagga mussels, izibane zezilwandle, ii-alewives, iinqwelo ze-Asia kunye nabanye abaninzi baye baguqula kakhulu i-Great Lakes ecosystem. Isilwanyana esisandul 'ukuzalwa esingekho esasibhaliweyo ukuba siye sabhalwa kwiiLwandle eziLwandle iindawo eziphambili zamanzi, i-crustacean eyayihlala olwandle lwaseMiddle East ngoku ngokukhawuleza ikhupha iLake Ontario.
Iintlobo ezifakiwe zikhuphisana neentlobo zasemhlabeni zokutya kunye nendawo yokuhlala kwaye zinokudlula ezili-180 iintlobo ezingezona zityalo ezangena kwiiLwandle eziMkhulu ukusuka ekupheleni kwekhulu le-19 leminyaka. Uninzi lwezityalo eziye zaziswa zihanjiswe kwiiLwandle eziLwandle eziLwandle eziLwandle, kodwa ezinye iintlobo ezifana ne-Asian carp, ziye zangena emachibini ngokubhukuda ngeendlela ezenziwe ngumntu kunye neengxowa ezidibanisa iLake Michigan ukuya River Mississippi.
Ezi zilandelayo ziimpawu eziphambili zeLwandle eziMkhulu:
iqela elikhulu lamachibi amanzi eMhlabeni
i-akhawunti engama-20 ekhulwini kuwo wonke amanzi asemhlabeni
i-akhawunti engaphezu kwe-80 ekhulwini yamanzi amanzi eNyakatho Melika
Izilwanyana ezenziweyo zatshintshile kakhulu i-Great Lakes ecosystem
ixhasa iintlobo ezingaphezu kwezi-3 500 zezityalo kunye nezilwanyana
Izilwanyana zamaLwandle amakhulu
Ezinye zezilwanyana ezihlala kwiiLwandle eziLwandle ziquka:
I-Lake whitefish ( iCoregonus clupeaformis ) - I-lakefishfish i-fishfish yintlobo yeentlanzi zamanzi ezihlambulukileyo ezisekhaya le-salmon. I-whitefishfish itholakala kuzo zonke iiLwandle eziLwandle kunye nezixhobo zorhwebo ezixabisekileyo. I-Lake whitefish isondla kwii-invertebrates ezisezantsi-phantsi ezinjengemiski, iiflamm, kunye nezibungu zamanzi ezinambuzane.
I-Walleye (i- Sander vitreous ) - I-walleye yinkulu yamanzi entlanzi ahlala kwiiLwandle eziLwandle kunye neendawo ezininzi zaseCanada kunye nenyakatho ye-United States. I-Walleye ibonwa njengemifanekiso yeendawo abahlala kuyo-yiyo intlanzi yaseburhulumenteni yaseMinnesota neSouth Dakota kwaye yiyo iintlanzi ezisemthethweni zaseSaskatchewan.
I- Perch e-flavescens ) - I-perch ephuzi yintlobo ye-perch ebandakanya ububanzi beLwandle oluLwandle kunye noMlambo waseSt. Lawrence. Umxhesho omhlophe wempuphu ephuzi kwiimvumba zezilwanyana zasemanzini, ama-crustaceans, i-mysid shrimp, amaqanda entlanzi kunye nentlanzi encinci.
I-Herdea Herodias ) - I-heron ehlaza okwesibhakabhaka iyinyoni enkulu ehamba phambili eqhelekileyo kwimimandla yamanzi amanxweme kuwo wonke iNorth American, kuquka i-Great Lakes. Iimvumi ezihlaza okomvu zinomyalelo osisigxina, esibukhali abasebenzisa ukubamba iintlobo zeentlobo ezincinci ezifana neentlanzi, ii-crustaceans, izinambuzane, iigundane, i-amphibians, izilwanyana ezinwabuzelayo kunye neentaka.
I-Canada lynx ( iLynx canadensis ) - I-Canada lynx yikati ephakathi ehlala emahlathini kulo lonke elaseKhanada nase-Alaska. Kwiindawo eziMmandla wamaLwandle amakhulu, iCanada lynx iqhutywe ngeLake Superior nakwiindawo ezisemntla yaseLake Ontario naseGeorgia Bay, i-Lake Huron e-Ontario, eCanada. I-lynx yaseCanada ziyimfihlo, izilwanyana ezinobusika ezondla kwiinqwelo ze-snowshoe, iindonga kunye neentaka.
I-Moose (i- Alces alces ) - I-moose yilungu elona liphilileyo leentsapho. I-Moose ihlala emahlathini omda kumanxweme asentla aseMantla amakhulu. I-Moose i-herbivores ezondla kwiintlobo ezahlukeneyo zezityalo kunye neengca.
I-turtle-snapping turtle (i- Chelydra serpentina ) - I-turtle ye-snapping eqhelekileyo yindawo exhaphakileyo ehlala emanzini amanzi ngasempuma kwiiRoyy Mountains, kuquka ne-Great Lakes. Ukuthungulwa kweentlanzi ziyaziwa ngokuba zibudlova.
I-bullfrog yaseMerika (i- Lithobates catesbeiana ) - I-American bullfrog iyinqumba enkulu eyenzeka kwimimandla yamanzi kwiNgingqi ye-Great Lakes. Ama-bullfrogs aseMerika yizilwanyana ezondla ezondla kwizilwanyana ezincinci, izilwanyana ezinwabuzelayo, kunye nama-invertebrates.
ILebhu yoPhando lweZendalo zoLondolozo lwendalo. NgeziLwandle Zethu Ezinkulu . Ifike ngoNovemba 22, 2013. Ipapashwe nge-intanethi kwi-https: //www.glerl.noaa.gov//pr/ourlakes/intro.html
JH. Ama-Amphibians kunye namaQuqu e-Great Lakes Region . IYunivesithi yaseMichigan Press; 1997. 400 iphe.
IKurta, A. Izilwanyana zeNgingqi eziLwandle eziLwandle . Uhlaziyo olulungisiweyo. IYunivesithi yaseMichigan Press; 1995. 392 iphe.
I-Arhente yoKhuselo yendalo. AmaLwandle amakhulu: i-Atlas Environmental kunye neNcwadi yeMithombo . 2012. Ishicilelwe kwi-intanethi kwi-https: //www.epa.gov/greatlakes
I-Arhente yoKhuselo yendalo. Iintlobo zeNdawo eziLwandle eziMandla eziNinzi . Kufumaneka ngoNovemba 22, 2013. Ipapashwe nge-intanethi kwi-https: //www.epa.gov/greatlakes
Omkhulu weBharrier Reef Umfanekiso
Yintoni Indawo yokuHlala?
Indlela yokudlala i-Pool njenge-Pros
Isiqhelo sesiFrentshi - Le Rythme
Ubungakanani Ubukhulu Bamandulo Obuninzi?